AmaZulu FC anciphisa imiholo yabadlali - Ilanga News
Home Ezemidlalo AmaZulu FC anciphisa imiholo yabadlali
AmaZulu FC anciphisa imiholo yabadlali
Isikhulu sale kilabhu sikhala ngokushayeka ephaketheni ngenxa ye-corona
ISIKHULU samaZulu FC uLunga Sokhela.
ISIKHULU samaZulu FC sicacisa ngesizathu esenze banquma ukunciphisa imiholo yabadlali bale kilabhu njengoba kugadle i-coronavirus umhlaba wonke.
Ezemidlalo zimisiwe emhlabeni jikelele eminye imidlalo yabhuntsha ngenxa ye-coronavirus esibaqedile abantu emhlabeni.
Emazweni amaningi ase-Europe abadlali nabaqeqeshi bayincishiselwe imiholo.
USuthu lube yikilabhu yokuqala ukuphumela obala ukuthi selunqume ukuyehlisa imiholo yabadlali ngenxa yokushayeka ezimalini ngenxa yalolu bhubhane lo mkhuhlane.
ULunga Sokhela oyimenenja jikelele yoSuthu ekhuluma naleli phephandaba izolo ngoLwesithathu ekuseni uthe isimo ababhekene naso singaphezu kwamandla abo yingakho benqume ukuyinciphisa imiholo yabasebenzi beki-labhu.
“Ngiyazi ukuthi abantu abathinteka kakhulu kulolu daba ngabadlali kodwa nathi siyathinteka.
“Abantu kufanele bakuqonde ukuthi imali yesibonelelo seligi ayanele ukubhekana nezindleko zekilabhu, umqashi kufanele kube khona akwengezayo.
“Njengoba isimo sinjena nje, amabhizinisi angabaxhasi bekilabhu nabanikazi bayo kabayenzi inzuzo ngendlela abebeyenza ngayo, izinto zishintshile, okwenze kwashayeka nekilabhu.
“Ukuntenga komnotho kusenze sabhekana nenselelo enzima. Akuthina sodwa kodwa zonke ezemidlalo emhlabeni.
“Kubuhlungu ngoba udaba lwethu lugcine luputshuka ngale ndlela kodwa ngiyazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi maningi amakilabhu asazoshayeka uma le nto iqhubeka.
“Abantu bangakusho abakusho-yo kodwa iqiniso limile, leli gciwane lidale omkhulu umonakalo emnothweni wethu obuvele untenga,” kusho uSokhela.
Limcela leli phephandaba ukuba acacise ukuthi uhlelo lo-kwehliswa kwemiholo luzohamba kanjani uthe: “Lena yinto yanga-phakathi ezoxoxwa nomuntu nga-yedwa.
“Lolu hlelo ngeke luthathe usuku olulodwa ngoba umuntu nomuntu unomholo wakhe.
Uma ngingenza isibonelo nje, uma uhola u-R8000 kuzofanele sixoxe nawe sivumelane ukuthi uzokwehliselwa ngamalini kanjalo na-kulabo abahola kakhulu.
“Lapha ekilabhini kuholwa uma inyanga iphela, ngakho-ke kulabo abanezikweletu bazoba nalo ithuba lokuxhumana nalabo ababakweletayo ngoba zonke izikweletu zinesibonelelo njengoba isimo sinjena.
“Sonke sizokwenza kanjalo ngoba akuyi ngokuthanda kwethu yisimo esiphoqayo wonke umuntu uyazi futhi uyabona ukuthi kwe-nzakalani emhlabeni,’’ kusho uSokhela.
Uthi bahlalele ethembeni lokuthi idlule le nto ukuze izinto zizobuyela esimweni. Uthi abakumincele wukuthi uma ibuya imidlalo ikilabhu iqede endaweni ephephile. Uthi unethemba lokuthi abadlali bazosiqonda isimo ikilabhu ekusona.
USokhela ukhuluma kanjena nje eSwitzerland, eGreece, eScotland nakwamanye amazwe ase-Europe abadlali batsheliwe ukuthi imiholo yabo izokwehliswa uma benqaba kuzofika isikhathi lapho amakilabhu engeke akwazi nhlobo ukubaholela ngenxa yokushayeka ezimalini.
Kuvela ukuthi amanye amakilabhu ase-Europe asebatshelile abadlali abahola kakhulu ukuthi ngeke abagcine azobadedela.
Kuthiwa amanye asekubeke kwacaca ukuthi kuzowathatha isikhathi ukuphinde asayinise abadlali abazohola izindodla zemali azobheka abadlali abazovuma uku-hola kancane.
Leli phephandaba lihletshelwe ngumthombo walo ongaphakathi eligini yakuleli ukuthi uma lokhu kuvalwa kwezwe kungaqhubeka izinyanga ezintathu njengoba kuqagulwa, inqwaba yamakilabhu akuleli izoguqa ngamadolo ngenxa yokungabi namali.
Uthi ngale kukaNhlangulana (June) kuningi okuzoshintsha okuthinta izinkontileka.
Kuzokhumbuleka ukuthi nabaxhasi bePremiership okuyi-Absa iyaphela inkontileka yabo nale nhlangano uma kusongwa isizini kanti njengoba kunjena akekho owaziyo ukuthi izokwelulwa yini.
Previous articleiqhinga lokuhlenga umnotho wakuleli
Next articleKuboshwe othumbe usana lwasekhweni